Midowga Europe oo Dowladda Somalia kala talin doonta Istaraajiyadda Dib-u-dhiska Milliteriga Qaranka – idalenews.com
Midowga Europe oo Dowladda Somalia kala talin doonta Istaraajiyadda Dib-u-dhiska Milliteriga Qaranka
Madaxa Ergadda Ururka Midowga Europe ‘EU’ u joogta dalka Uganda, Roberto Ridolfi, ayaa faahfaahin ka bixiyey Go’aankii ay EU-da bishii hore ku cusbooneysiisay Xilli-hawleedkooda ku aadan Tababarka Ciiddamadda Qaranka Somalia (SNA).
Waxa uu sheegay inuusan Hawlgalka Midowga Europe ee EU Training Mission (EUTM) sidii loo dhisi lahaa Ciiddamo Somali oo awoodi kara inay dib-u-hantaan dhulalka ay Kooxda Alshabaab weli ka joogto Somalia.
‘Hawlgalka EUTM waxa kaloo uu ka qeyb qaadan doonaan sidii ay Wasaaradda Difaaca kala talin lahaayeen dhismaha Hay’addaha Milliteriga iyo sidii ay Ciiddamadda u noqon lahaayeen kuwo tiro iyo tayo leh, oo hanan kara Adeegyadda Milliteriga Qaranka’ ayuu yiri Ergayga.
Ridolfi waxa kaloo uu sheegay in Saraakiisha iyo Tabbarayaasha Hawlgalka ee EUTM loo wareejin doono magaalladda Muqdisho, si ay u helaan awood dheeri ah oo ay ku horumarin karaan Amniga.
Hawlgalka Tababarayaasha Milliteriga ee Midowga Europe ee ay ku carbinayaan Milliteriga Somalia ayaa waxa uu bilwoday sannadkii 2010, iyagoo ku guuleystay inay ku-dhawaad 3,000 oo Askar Soomaali ah ku soo tababaraan Xeradda Milliteriga ee Bihanga ee Galbeedka dalka Uganda.
Tababar loo furay ciidamo loogu talagalay ilaalinta deegaanka
(DAAWO SAWIRADDA). Ciiddamadda Somalia oo ay Saraakiisha Ururka Midowga Europe tababarayaan